“Maradona wuxuu ka jiran yahay maskaxda” _ halyayga reer Argantina Mario Kempes oo si weyn u difaacay Messi – Gool FM
(Argantina) 20 Okt 2018. Halyayga xulka qaranka Argantina ee Mario Kempes ayaa ku tilmaamay Diego Maradona inuu maskaxda ka jiran yahay isla markaana uu diiraada saaro tababarka kooxdiisa reer Mexico, kadib weerarkii dhanka afka ahaa uu ku qaaday dhawaanahan Lionel Messi.
Diego Maradona ayaa wuxuu la kulmay dhaleeceeno kala duwun, kadib hadaladii uu dhawaan ku weeraray Messi, kaasoo uu ku tilmaamay in 20 jeer uu galo suuli kahor kulamada waaweyn.
Laakiin Mario Kempes oo isna kula soo guuleestay xulka qaranka Argantina koobka aduunka 1978 ayaa halkiisa kasii waday inuu u jawaab celiyo markale Maradona, kadib markii uu horey arintan kaga soo hadlay.
“Xaqiiqada ayaa ah in Messi uusan kaligiis guuleysan karin, waa wax aan wada ognahay dhamaanteen, marka laga reebo Maradona aad moodo inuu maskaxda ka jiran yahay iyo taageerayaashiisa, sababatoo ah Lio wuxuu u baahan yahay koox iyo macalin fiican”.
“Waxaa jira warar ku aadan in Maradona uu ka qoomameenayo hadaladii uu ku yiri Meesi, ama uu u fahmay in hadalkii uu sheegay uu yahay mid qaldan”.
“Waxay ila tahay inuu u baahan yahay in uu is dajiyo, sababtoo ah mar walba uu hadlo Maradona wuxuu dhibaato u geystaa qof walba”.
"Waan la dhacsanaa Bandhiga ciyaartoydeeda, laakiin waan ka Niyadjabay markii ay la yimaadeen Sheekada Manchester United....".- Sarri